Ifektri yomsuki weentsholongwane | Abavelisi base China china Washer Disinfector
Manual Door Chela wokucoca
I-Rapid-M-320 yincwadana yezoqoqosho yeschool-washer-disinfector eyaphanda kwaye yaphuhliswa ngokweemfuno zezibhedlele ezincinci okanye iziko. Umsebenzi wayo kunye nokuhlamba ngokufanelekileyo kuyalingana neRipid-A-520. Ikwanokusetyenziselwa ukubulala iintsholongwane kwizixhobo zoqhaqho, kwimpahla, iitreyi zonyango kunye neepleyiti, izixhobo zokubulala iintlungu kunye nemibhobho ebolileyo kwisibhedlele i-CSSD okanye kwigumbi lokusebenza.
Ukuhlanjwa koxinzelelo olubi
Inkqubo yokubeka iliso kwi-SHINVA yeLumen yokuHlamba iSiphumo
■ Indlela yokuvavanya ukusebenza kwesiphumo
Ukuhlanjwa kwenkunkuma kwe-pulse kwahlukile kukuhlanjwa kwesitshizi, isebenzisa umgaqo omtsha womsebenzi ukusombulula zonke iintlobo zezixhobo ezintsonkothileyo ezinomjelo ongaphezulu, izixhobo kunye ne-lumen. Ukulungiselela ukungqinisisa okungaphezulu kwesiphumo sokuhlamba, i-SHINVA yazisa ngezisombululo ezithile zokujonga isiphumo sokuhlamba ngokweempawu:
Iitonela zokuhlamba iimpahla
Ububanzi be-washer-disinfector yi-1200mm kuphela enikezela ukufakela okufanelekileyo kwaye okona kunciphisa iindleko kunye nexesha lofakelo.
I-DXQ ye-multifunction rack washer-disinfector yenzelwe izinto zokubambisa esibhedlele ezinje ngebhedi yesigulana, inqwelo kunye nendawo yokubeka, isitya njl njl. Inokugqibezela yonke inkqubo kubandakanya ukuhlamba, ukuhlamba, ukubulala iintsholongwane, ukomisa njl.
I-DXQ ye-multifunction rack washer-disinfector ingasetyenziselwa indawo yezonyango kunye neyempilo okanye ilabhoratri yezilwanyana ukuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane kwizinto ezifanelekileyo kubandakanya lonke uhlobo lwetroli, ibhasikiti yeplastiki, isitya sokubulala iintsholongwane kunye nesivalo sayo, itafile yotyando kunye nezihlangu zotyando, iikheji zelebhu yezilwanyana, njl.
I-Rapid-A-520 Automatic Washer-disinfector sisixhobo sokuhlamba esisebenza kakuhle esenze uphando kwaye saphuhliswa ngokwesibhedlele imeko eyiyo. Isetyenziswa ngokubanzi ukuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane kwizixhobo zotyando, iimpahla, iitreyi zonyango kunye neepleyiti, izixhobo zokubulala iintlungu kunye nethumbu elirholayo kwisibhedlele i-CSSD okanye kwigumbi lokusebenza. Olona ncedo lukhulu kwezixhobo kukugcina abasebenzi ngesantya sokuhlamba esikhawulezayo esinokunciphisa ixesha lokusebenza kwe-1/3 kunangaphambili.